Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Da’ yar iyo Iswiidhan / Dareemida wanaag / Goobaha internetka ee leh macluumaad, talo iyo taageero
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 21 2 2019
Terrafem waxay leedahay sanado badan oo ah waayo-aragnimada in la taageero haweenka iyo gabdhaha lagu dhibaateeyay dagaal. Iyagu waxay ku hadlaan luqado badan oo kala duwan.
Unizon wuxuu ururinayaa in ka badan 130 xarrumo dumar, xarrumo gabdho iyo xarrumo kaalmeeyn ah kuwaaso ka shaqeynaya bulsho simman oo ka maran gacan ka hadal.
Khadka nabadgelinta dumarka waa telefoon lambar oo qaranka, wuxu quseeyaa adiga hanjabaad iyo jirdil la kulmay.
Khadka kaalmada ee Rädda barnen
Khadka kaalmada ee Rädda barnen waa khad kaalmo oo luqado badan looguna tala galay ilmaha iyo dhalinyarada. Adiga wacaya waxaad ahaan kartaa mid aan la garaneyn. Dadka qaan gaarka ah ee ka jawaabaya waxey waayo arag ku yihiin iney dhageystaan waadna hadli kartaa, isla markaasna waxaad heleysaa talo iyo kaalmo oo luqadaada hooyo ah.
Carruurta iyo iyo dhalinyarada ee ilaa 18 sano ah waxey si qarsoodi iyo kharash la'aan ah u tagi karaan BRIS marka ay u baahan yihiin kaalmo dadka weyn ah.
Ururka dalladda guud ee ka warbixinta galmada (RFSU)
Ururka dalladda guud ee ka warbixinta galmada - RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) - SE
Ururka dalladda guud ee sinnaanta xuquuqda galmada (RFSL)
Ururka dalladda guud ee sinnaanta xuquuqda galmada - RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) - SE
Eegida adeega arrimaha bulshada
Dhinaca kollpasoc.se waxaad ka helaysaa caawimaada in la helo taageero, macluumaad ku saabsan waxa adeega arrimaha bulshadu sameeyaan isla markaana laga helayaa caawimaada in la fahmo erayada adag ee aad la kulmi karto marka lala joogo adeega arrimaha bulshada.